ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ မက်ဆီ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးတာလဲ? - Sports Gabar
ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ မက်ဆီ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးတာလဲ?
October 10, 2019 - by Lu Nyochaw
လီယွန်နယ်မက်ဆီဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ဒီဘဲကြီးကို ဘာစီလိုနာအသင်းလိုဂိုနဲ့ တွဲမြင်မိကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်ကစားသမားဖြစ်သလို၊ သူ့ရဲ့အတောက်ပဆုံးခြေစွမ်းတွေဟာလည်း ဘာစီလိုနာနဲ့သာ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါ။
ဘာစီလိုနာဟာ မက်ဆီ၊ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာပါပဲ။ မိခင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းမှာတောင် ဘာစီလိုနာမှာလောက် ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလို ဘာစီလိုနာမဟုတ်တဲ့ အခြားနေရာမှာ မက်ဆီရဲ့ အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းဆိုတာဟာလည်း ရှာရခက်ကြီးပါ။ ဘာစီလိုနာနဲ့မက်ဆီကို ခွဲခြားမြင်ဖို့ခက်သလို အကယ်လို့ မက်ဆီသာ အခြားအသင်းတစ်သင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အားလုံးအတွက် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားနိုင်လောက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့(၂၀၁၃)ခုနှစ်တုန်းက ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားဖို့ နီးစပ်ခဲ့ဖူးပြီး၊ ဘောလုံးပါရမီရှင် မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာကိုစွန့်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ မက်ဆီက-
“ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရရင်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော် ဘာကာ ကနေထွက်ခွာဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးပါတယ်” ” ဒီလိုတွေးခဲ့တာဟာ ဘာစီလိုနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စပိန်မှာ အချိန်အကြာကြီးမနေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ ကလပ်အချို့လည်းရှိခဲ့ပေမဲ့ သူတို့ဘက်က တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတော့ မရရှိခဲ့ပါဘူး” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီဟာ အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်မှာ ဘာစီလိုနာရဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ (၁၆)နှစ်အရွယ်မှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းကြီးနဲ့အတူ စတင်ပွဲထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအတွက် ဂိုးပေါင်း(၆၀၀)ကျော်သွင်းပေးထားပြီး၊ ဇာဗီ ပြီးလို့ရှိရင် ဘာစီလိုနာအတွက် ပွဲအများဆုံးကစားထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး မက်ဆီက-
” ကျွန်တော့်စိတ်ကူးကတော့ ဒီမှာ နှစ်တွေအကြာကြီးရှိနေချင်ပါသေးတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရော ကျွန်တော့်မိသားစုပါ ဘာစီလိုနာမှာ အရမ်းပျော်နေကြတာလည်းပါတာပေါ့၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုလည်း ဘာကာမှာပဲ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ် ” လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာကနေ ထှကျခှာဖို့ မကျဆီ ဘာကွောငျ့ ဆုံးဖွတျခဲ့ဖူးတာလဲ?
လီယှနျနယျမကျဆီဆိုတဲ့ အသံကွားလိုကျတာနဲ့ ဒီဘဲကွီးကို ဘာစီလိုနာအသငျးလိုဂိုနဲ့ တှဲမွငျမိကွမှာ အမှနျပါပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာမှာပဲ ကွီးပွငျးခဲ့တဲ့ ငယျမှေးခွံပေါကျကစားသမားဖွဈသလို၊ သူ့ရဲ့အတောကျပဆုံးခွစှေမျးတှဟောလညျး ဘာစီလိုနာနဲ့သာ အလိုကျဖကျဆုံးဖွဈနတေဲ့အတှကျပါ။
ဘာစီလိုနာဟာ မကျဆီ၊ မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာပါပဲ။ မိခငျနိုငျငံဖွဈတဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးမှာတောငျ ဘာစီလိုနာမှာလောကျ ခွစှေမျးပွသနိုငျခွငျးမရှိခဲ့သလို ဘာစီလိုနာမဟုတျတဲ့ အခွားနရောမှာ မကျဆီရဲ့ အောငျမွငျမှုမှတျတမျးဆိုတာဟာလညျး ရှာရခကျကွီးပါ။ ဘာစီလိုနာနဲ့မကျဆီကို ခှဲခွားမွငျဖို့ခကျသလို အကယျလို့ မကျဆီသာ အခွားအသငျးတဈသငျးကို ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့မယျဆိုရငျ ဒါဟာ အားလုံးအတှကျ ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈသှားနိုငျလောကျတဲ့ ကိစ်စတဈခုလညျးဖွဈလာမှာပါ။
ဒါပမေဲ့ လှနျခဲ့တဲ့(၂၀၁၃)ခုနှဈတုနျးက ဒီဖွဈရပျဖွဈပှားဖို့ နီးစပျခဲ့ဖူးပွီး၊ ဘောလုံးပါရမီရှငျ မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာကိုစှနျ့ခှာဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ဖူးတယျလို့ ဝနျခံလိုကျပါတယျ။ မကျဆီက-
“ရိုးရိုးသားသားဝနျခံရရငျ၊ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ကြှနျတျော ဘာကာ ကနထှေကျခှာဖို့ စဉျးစားခဲ့ဖူးပါတယျ” ” ဒီလိုတှေးခဲ့တာဟာ ဘာစီလိုနာကွောငျ့မဟုတျဘဲ စပိနျမှာ အခြိနျအကွာကွီးမနလေိုတဲ့အတှကျကွောငျ့သာဖွဈပါတယျ၊ ကြှနျတျောပွောငျးခငျြတဲ့ ကလပျအခြို့လညျးရှိခဲ့ပမေဲ့ သူတို့ဘကျက တရားဝငျကမျးလှမျးမှုမြိုးတော့ မရရှိခဲ့ပါဘူး” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
မကျဆီဟာ အသကျ(၁၃)နှဈအရှယျမှာ ဘာစီလိုနာရဲ့လာမာစီယာအကယျဒမီကိုရောကျရှိလာခဲ့သူဖွဈပွီး၊ (၁၆)နှဈအရှယျမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးကွီးနဲ့အတူ စတငျပှဲထှကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘာစီလိုနာအတှကျ ဂိုးပေါငျး(၆၀၀)ကြျောသှငျးပေးထားပွီး၊ ဇာဗီ ပွီးလို့ရှိရငျ ဘာစီလိုနာအတှကျ ပှဲအမြားဆုံးကစားထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။ ဆကျလကျပွီး မကျဆီက-
” ကြှနျတေျာ့စိတျကူးကတော့ ဒီမှာ နှဈတှအေကွာကွီးရှိနခေငျြပါသေးတယျ၊ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျရော ကြှနျတေျာ့မိသားစုပါ ဘာစီလိုနာမှာ အရမျးပြျောနကွေတာလညျးပါတာပေါ့၊ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုလညျး ဘာကာမှာပဲ အဆုံးသတျခငျြပါတယျ ” လို့ ထုတျဖျောပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
Previous Article ကာဂျစ္စတန်ကို နိုင်ပါ့မလား မြန်မာ???
Next Article အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ထိုးသတ်မယ့်လူ့ဘီလူးကြီးဘရန်ဒန်ဗီရာဆိုတာ…